သငျ့အိမျက သရကျပငျ အသီးမတငျတာ ဘာ့ကွောငျ့လဲ – Daily Feed MM
သငျ့အိမျက သရကျပငျ အသီးမတငျတာ ဘာ့ကွောငျ့လဲ
Admin_John | March 22, 2022 | Knowledge | No Comments
၂၀၁၅-၁၆ ခုနှဈ သရကျသီး ရာသီ အတှငျး သရကျပငျ အမြားစုမှာ ပနျး မြားစှာ ပှငျ့ကွတာကို တှခေဲ့ရ ပါတယျ။ သို့သျော အခြို့အပငျတှမှော ပနျးခိုငျ မြားက ပနျးပှငျ့ လာပမေယျ့ အသီး မတငျလာ တာတှေ၊ ပနျးခိုငျမြား ခွောကျသှား တာတှကေို တှရေ့
ပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့ ဖွဈရတာလညျး ဆိုတာ ရှငျးပွပေး စလေိုပါတယျ။သရကျ ပနျးခိုငျ မြားမှ ပနျးမြား ပှငျ့လာ ပွီးနောကျ အသီး မတငျတာ၊ အခြို့ပနျးခိုငျ မြားဟာ အသီး မတငျလာဘဲ ခွောကျသှားရတဲ့အကွောငျးရငျး မြားစှာ ရှိပါတယျ။ ရောဂါ ကရြောကျလို့ ဖွဈလာ
ရတာ၊ ဇီဝကမ်မ ဖောကျပွနျမှု မြားကွောငျ့ ဖွဈလာရတာနဲ့ ပနျးခိုငျထှကျ စဉျကာလမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ရာသီဥတုကွောငျ့ ဖွဈလာရတာ တှဆေိုပွီး တှရေ့ပါတယျ။
(၁) ပထမ အနနေဲ့ (Anthracnose) လို့ချေါတဲ့ ပနျးခိုငျခွောကျ စတေဲ့ သရကျကိုငျး မြားမှာလညျး ခွောကျပွီး သစေတေဲ့ ရောဂါကရြောကျလို့ ဖွဈပါတယျ။ Collectotrichum gloeosporioides လို့ချေါတဲ့ မှိုကွောငျ့ ဖွဈရတာပါ။ ပနျးပှငျ့ မြားမှာ ညီညာမှု မရှိ
တဲ့အနကျရောငျ အကှကျငယျမြား ဖွဈလာပွီး အပှငျ့မြား ကွှကေသြှား စသေလို အသီးမတငျဘဲ ပနျးခိုငျမြားလညျး ခွောကျသသှေားစနေိုငျပါတယျ။ ပနျးခိုငျထှကျလာပွီး သငျ့တျောတဲ့ မှိုသတျဆေးမြား ပကျဖနျြး ကာကှယျရနျ လိုပါတယျ၊
(၂) ပနျးခိုငျမြား ခွောကျသှား စနေိုငျတဲ့ နောကျရောဂါ တဈမြိုးကတော့Bacterial Black Blight လို့ ချေါတဲ့ ရောဂါပါ။ Pseu-domonas syringae ဘကျတီးရီးယား ကွောငျ့ဖွဈပွီး ယနထေိ့ ကာကှယျနညျး မရှိ သေးပါ။ ပနျးပှငျ့မြား အရောငျပွောငျး လာစပွေီး
ခွောကျသသှေား စနေိုငျပါတယျ။ ဒီရောဂါဖွဈရငျ Anthrac-nose ရောဂါထကျ တဈသြှူးသမှေု ပိုဖွဈစပေါတယျ။
(၃) ပနျးခိုငျမှာ ဖားဥ မှိုရောဂါ (Powdery mildew) လို့ချေါတဲ့ Oidium spp. မှိုကရြောကျခွငျး ကွောငျ့လညျး ပနျးခိုငျမြား ပုံမှနျမကွီးထှား လာဘဲ အသီး မတငျနိုငျတာ ဖွဈစပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ စိုထိုငျးဆမြား နကော ရာသီဥတု အေးပွီး ခွောကျသှနေ့ပေါက
ဒီရောဂါကြ ရောကျလာနိုငျ ပါတယျ။ ရောဂါကြ ရောကျတာကို စတှတေ့ာနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ မှိုသတျဆေးကို ပကျဖနျြး ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
(၄) ပနျးခိုငျမြား ခွောကျသေ သှားနိုငျတဲ့ နောကျအခကျြ တဈခုကတော့ ပနျးခိုငျ ထှကျခြိနျမှာ ရာသီဥတု ပိုမိုအေးလာခဲ့ရငျ၊ ရခေဲမှတျလောကျထိမြား ရောကျသှားခဲ့ရငျ လညျး ပနျးခိုငျမြားခွောကျပွီး သသှေားတတျ ပါသေးတယျ။ ယခုနှဈသရကျပငျ ပနျးခိုငျ ထှကျပနျး
ပှငျ့ခြိနျမှာ အအေးဓာတျကွောငျ့ ပနျးခိုငျမြား ခွောကျသသှေားရတာ ဖွဈပါတယျ။ ပနျးခိုငျထှကျလာခြိနျမှာ အအေး ဓာတျမြားနခေဲ့ပါက ထှကျလာတဲ့ ပနျးခိုငျ မြားကို ဖွတျခွှပေေးလိုကျပါ။ ရာသီပွနျ လညျကောငျးလာပါက ပနျးခိုငျထပျမံထှကျ လာစမှောဖွဈပါတယျ။
(၅) ပနျးခိုငျထှကျ ပနျးပှငျ့ပွီး အသီး မတငျနိုငျတဲ့ အခွအေနကေို ဖွဈလာစနေိုငျတာ နောကျတဈမြိုးကတော့ ပနျးပှငျ့နစေဉျ အပူခြိနျမွငျ့မား လာခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ယခငျဆှေးနှေးခဲ့စဉျက ပွောခဲ့သလို ပနျးပှငျ့မြား ၀တျမှုနျကူးပွီး သန်ဓအေောငျစကော အသီး
တငျလာစရေနျ အတှကျ သရကျ သီးမြိုးအလိုကျမွငျ့မားတဲ့အပူခြိနျကို ခံနိုငျ ရညျရှိမှု မတူကွပါ။ အပူဒဏျမခံနိုငျတဲ့ သရကျမြိုးတှမှောပနျးပှငျ့စဉျ အပူခြိနျမွငျ့ မားနမှေုကွောငျ့ ၀တျမှုနျကူး၊ သန်ဓအေောငျမှု မရှိနိုငျတော့တဲ့အတှကျ အသီးမတငျရခွငျး ဖွဈစပေါတယျ။
(၆) အပငျရဲ့ ဇီဝကမ်မ ဖောကျပွနျမှု ကွောငျ့လညျး သရကျပနျးခိုငျ ပုံမှနျ မဖွဈလာဘဲ အသီးမသီးနိုငျတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မွနျမာလို သရကျပငျမူမမှနျကွီးထှား ဖှံ့ဖွိုးမှု (Mango Malformation) လို့ချေါနိုငျမယျ ထငျပါတယျ။ အပငျပိုငျး အကိုငျးအရှကျ မြားမှာ
လညျးဖွဈနိုငျသလို ပနျးခိုငျမြားမှာ လညျးဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သရကျပနျးခိုငျ ရိုးတံမြားဖွဈတဲ့ ပနျးခိုငျပထမကိုငျး၊ ပနျးခိုငျဒုတိယကိုငျးနဲ့ တဈပှငျ့ခငျြးရှိအပှငျ့ရိုး တံမြားဟာ သာမနျထကျတိုနကွေပွီး တုတျနတေတျပါတယျ။ အကိုငျးဖွာမှုမြားနပွေီး ပနျးခိုငျမြားဟာ အစိမျး
ရောငျဖွဈနေ တတျပါတယျ။ ပနျးခိုငျမှာ ပနျးပှငျ့မြားစှာပါ နကွေပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ အဖိုပှငျ့မြား ဖွဈနကွေကာ လိငျစုံပှငျ့အထူးနညျးပါးနပွေီး ပနျးပှငျ့မလာနိုငျကွတာမြားပါတယျ။ အကိုငျးတဈခုတညျးမှထှကျလာတဲ့ ပနျးခိုငျ တဈခုတညျးမှာပငျ ပုံမှနျပနျးခိုငျရော
မူမမှနျ တဲ့ပနျးခိုငျရော အတူရှိနနေိုငျတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပနျးပှငျ့ မြားဟာ အသီးမ တငျနိုငျဘဲ မဲခွောကျသသှေား တတျပါတယျ။ အပငျ ဇီဝကမ်မ ဖောကျပွနျမှုကွောငျ့ ဖွဈလာရမှုဖွဈကာ ဖွဈလာရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို တိတိကကြမြ ဖျောထုတျနိုငျကွသေးပါ။
(၇) သရကျ ပငျမြား ပနျးခိုငျထှကျပနျး ပှငျ့ကာ အသီးမတငျနိုငျတဲ့အခွားအ ကွောငျးမြားလညျးရှိကွပါတယျ။ ဥပမာ- ပနျးပှငျ့စဉျ မွတှေငျး အစိုဓာတျ မလုံလောကျမှု၊ အစာအာဟာရဓာတျမြား ခြို့တဲ့နမှေု၊ ပနျးပှငျ့နစေဉျ ၀တျမှုနျကူးပေးမညျ့ပြား၊ ယငျစသညျ့ အငျး
ဆကျပိုး မြားနညျးပါးနမှေု၊ လပွေငျးတိုကျခတျမှု စတဲ့အခကျြမြား ကွောငျ့လညျး အသီးမတငျနိုငျကွတာကို တှရေ့နိုငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ သတိထားရ မှာက ပနျးခိုငျထှကျပနျးပှငျ့ပွီး အသီးကငျး စတငျလာပွီးနောကျပိုငျး အသီးတှေ ကွှေ ကကြုနျလို့ အသီး မတငျ
တာနဲ့ မရောမိစေ ဖို့လိုပါတယျ။အသီးကငျးဝငျပွီးနောကျပိုငျး သရကျ သီးမြားမမှညျ့မီအဆငျ့ထိ သရကျသီးမြား ကွှကြေ သှားရတဲ့ အခွအေနေ တှကေိုလညျး တဈဆကျတညျးရှငျးပွပေးစလေိုပါတယျ။
သရကျပငျမြား ပနျးခိုငျထှကျပနျးပှငျ့ လာကာ အသီးတငျလာပွီးနောကျပိုငျး အသီး မြား ဆကျလကျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးနစေဉျ အသီး ရငျ့မှညျလာသညျ့ကာလအတှငျးမှာလညျး သရကျသီးမြား အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ အသီးမြား ကွှကြေ သှားတတျပါတယျ။ အမြား
အားဖွငျ့ သရကျပနျးခိုငျ တဈခိုငျမှာ ပါတဲ့ လိငျစုံပှငျ့မြားရဲ့ သုည ဒသမ ၆ မှ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သာ အသီးရငျ့ မှညျ့ခူး ဆှတျနိုငျကွပါတယျ။ သရကျမြိုး အလိုကျ ကှာခွားမှုရှိကွသျောလညျး သရကျ မြိုးအမြားစုမှာ သရကျသီးကငျးဖွဈလာပွီးနောကျ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျး
ခနျ့ကွှကေသြှားလေ့ ရှိကွပါတယျ။ သရကျမြိုးအမြားစုမှာ ပနျး ခိုငျတဈခိုငျမှာ ရငျ့မှညျ့တဲ့အသီးတဈသီး သာကနျြနလေရှေိ့ပွီး အခြို့သရကျမြိုးမြား မှာ ပနျးခိုငျတဈခိုငျမှာရငျ့မှညျ့တဲ့သရကျသီး နှဈလုံး သို့မဟုတျ ပိုပွီးကနျြရှိပါတယျ။ အခြို့သရကျမြိုး မြားမှာမူ ၀တျမှုနျကူး၊
သန်ဓေ အောငျထားတဲ့အသီးကငျး ၁၅၀ မှာ တဈလုံးသာ ရငျ့မှညျ့ခြိနျမှာ ကနျြနေ တတျပါတယျ။
အသီးအရှယျ မရငျ့သေးမီ အသီးကွီး ထှားမှုအဆငျ့တိုငျးမှာ သရကျမြိုးတိုငျး အသီးကွှကြေ ပါတယျ။ အသီးအမြားဆုံး ကွှကေမြှေုကိုတော့ ၀တျမှုနျကူးပွီးနောကျ ရကျသတ်တ သုံးပတျမှ လေးပတျသားမှာတှေ့ ရပါတယျ။ စောစှာ အသီးကွှမှေု အမြားဆုံးဖွဈရခွငျးရဲ့
အကွောငျးရငျးမြားကတော့ ၀တျမှုနျကူးမှုမရှိခွငျး၊ မိမိဝတျမှုနျနဲ့ သဟ ဇာတမဖွဈခွငျး (self-incompatibility)၊သန်ဓမေ အောငျခွငျး၊အသီးငယျမြားအခငျြး ခငျြး အစာအပွိုငျ စားသုံးကွခွငျး (competition among developing fruit)၊ ပိုးနှငျ့ ရောဂါ မြားကြ
ရောကျဖကျြဆီးခွငျး၊ အစိုဓာတျ လုံလောကျမှုမရှိခွငျး (ရငေတျခွငျး) ကွောငျ့ အပငျတှငျးအစာအာဟာရနဲ့ ဟျောမုနျးမြား မညီမြှမှုစသညျတို့ကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယအကွိမျ အသီးကွှမှေု မြားတဲ့ ကာလကတော့ သန်ဓေ အောငျမွငျကာ အသီးတငျ ပွီးနောကျ ရကျ ၆၀-၇၀၊ အသီး ကွီးထှားမှုအလယပြိုငြး ကာလမှာ ဖှစပြှီး တတိယ အကှိမြ အသီးေ
လိုအပျသညျ့ အစာ အာဟာရမြား ကွှေးခွငျး၊ (၄) အပငျဟျောမုနျ မြားကို အသုံးပွု ကွခွငျးနှငျ့ (၅) ၀တျမှုနျကူးမှု ကောငျးမှနျ လာစရေနျ ပြားမြား၊ ယငျမြား မှေးမွူ ကူညီပေးခွငျးမြားကို ဆောငျရှကျပေးကွပါတယျ။
အသီး ကွီးထှားနစေဉျ ဖွဈပျေါလာတဲ့ လပွေငျးတိုကျခွငျး၊ မိုးသီးကခြွငျး၊ မုနျတိုငျး တိုကျခတျခွငျး၊ မိုးအုံ့မှိုငျး နကော နသောမှု နညျးပါုးခွငျး စတဲ့ ရာသီဥတု အခွအေနေ မြားကွောငျ့လညျး အသီးမြား ကွှကြေ နိုငျပါတယျ။ အသီးကွှမှေု နညျးပါး သကျသာ စရေနျ
အတှကျသရကျမြိုး အလိုကျ၊ စိုကျပြိုးရာ ဒသေအလိုကျ သငျ့တျော ကိုကျညီတဲ့ စိုကျပြိုး ပွုစုနညျး စနဈမြားကို အသုံးပွု ဆောငျရှကျ ကွရနျဖွဈပါတယျ။
– ဒေါကျတာ (စိနျလှဗိုလျ)
၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ် သရက်သီး ရာသီ အတွင်း သရက်ပင် အများစုမှာ ပန်း များစွာ ပွင့်ကြတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ သို့သော် အချို့အပင်တွေမှာ ပန်းခိုင် များက ပန်းပွင့် လာပေမယ့် အသီး မတင်လာ တာတွေ၊ ပန်းခိုင်များ ခြောက်သွား တာတွေကို တွေ့ရ
ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလည်း ဆိုတာ ရှင်းပြပေး စေလိုပါတယ်။သရက် ပန်းခိုင် များမှ ပန်းများ ပွင့်လာ ပြီးနောက် အသီး မတင်တာ၊ အချို့ပန်းခိုင် များဟာ အသီး မတင်လာဘဲ ခြောက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ ရောဂါ ကျရောက်လို့ ဖြစ်လာ
ရတာ၊ ဇီဝကမ္မ ဖောက်ပြန်မှု များကြောင့် ဖြစ်လာရတာနဲ့ ပန်းခိုင်ထွက် စဉ်ကာလမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်လာရတာ တွေဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
(၁) ပထမ အနေနဲ့ (Anthracnose) လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းခိုင်ခြောက် စေတဲ့ သရက်ကိုင်း များမှာလည်း ခြောက်ပြီး သေစေတဲ့ ရောဂါကျရောက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Collectotrichum gloeosporioides လို့ခေါ်တဲ့ မှိုကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ပန်းပွင့် များမှာ ညီညာမှု မရှိ
တဲ့အနက်ရောင် အကွက်ငယ်များ ဖြစ်လာပြီး အပွင့်များ ကြွေကျသွား စေသလို အသီးမတင်ဘဲ ပန်းခိုင်များလည်း ခြောက်သေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းခိုင်ထွက်လာပြီး သင့်တော်တဲ့ မှိုသတ်ဆေးများ ပက်ဖျန်း ကာကွယ်ရန် လိုပါတယ်၊
(၂) ပန်းခိုင်များ ခြောက်သွား စေနိုင်တဲ့ နောက်ရောဂါ တစ်မျိုးကတော့Bacterial Black Blight လို့ ခေါ်တဲ့ ရောဂါပါ။ Pseu-domonas syringae ဘက်တီးရီးယား ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ထိ ကာကွယ်နည်း မရှိ သေးပါ။ ပန်းပွင့်များ အရောင်ပြောင်း လာစေပြီး
ခြောက်သေသွား စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ရင် Anthrac-nose ရောဂါထက် တစ်သျှူးသေမှု ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
(၃) ပန်းခိုင်မှာ ဖားဥ မှိုရောဂါ (Powdery mildew) လို့ခေါ်တဲ့ Oidium spp. မှိုကျရောက်ခြင်း ကြောင့်လည်း ပန်းခိုင်များ ပုံမှန်မကြီးထွား လာဘဲ အသီး မတင်နိုင်တာ ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိုထိုင်းဆများ နေကာ ရာသီဥတု အေးပြီး ခြောက်သွေ့နေပါက
ဒီရောဂါကျ ရောက်လာနိုင် ပါတယ်။ ရောဂါကျ ရောက်တာကို စတွေ့တာနဲ့ သင့်တော်တဲ့ မှိုသတ်ဆေးကို ပက်ဖျန်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) ပန်းခိုင်များ ခြောက်သေ သွားနိုင်တဲ့ နောက်အချက် တစ်ခုကတော့ ပန်းခိုင် ထွက်ချိန်မှာ ရာသီဥတု ပိုမိုအေးလာခဲ့ရင်၊ ရေခဲမှတ်လောက်ထိများ ရောက်သွားခဲ့ရင် လည်း ပန်းခိုင်များခြောက်ပြီး သေသွားတတ် ပါသေးတယ်။ ယခုနှစ်သရက်ပင် ပန်းခိုင် ထွက်ပန်း
ပွင့်ချိန်မှာ အအေးဓာတ်ကြောင့် ပန်းခိုင်များ ခြောက်သေသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခိုင်ထွက်လာချိန်မှာ အအေး ဓာတ်များနေခဲ့ပါက ထွက်လာတဲ့ ပန်းခိုင် များကို ဖြတ်ခြွေပေးလိုက်ပါ။ ရာသီပြန် လည်ကောင်းလာပါက ပန်းခိုင်ထပ်မံထွက် လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ပန်းခိုင်ထွက် ပန်းပွင့်ပြီး အသီး မတင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်လာစေနိုင်တာ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ပန်းပွင့်နေစဉ် အပူချိန်မြင့်မား လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က ပြောခဲ့သလို ပန်းပွင့်များ ၀တ်မှုန်ကူးပြီး သန္ဓေအောင်စေကာ အသီး
တင်လာစေရန် အတွက် သရက် သီးမျိုးအလိုက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကို ခံနိုင် ရည်ရှိမှု မတူကြပါ။ အပူဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ သရက်မျိုးတွေမှာပန်းပွင့်စဉ် အပူချိန်မြင့် မားနေမှုကြောင့် ၀တ်မှုန်ကူး၊ သန္ဓေအောင်မှု မရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက် အသီးမတင်ရခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။
(၆) အပင်ရဲ့ ဇီဝကမ္မ ဖောက်ပြန်မှု ကြောင့်လည်း သရက်ပန်းခိုင် ပုံမှန် မဖြစ်လာဘဲ အသီးမသီးနိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာလို သရက်ပင်မူမမှန်ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှု (Mango Malformation) လို့ခေါ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အပင်ပိုင်း အကိုင်းအရွက် များမှာ
လည်းဖြစ်နိုင်သလို ပန်းခိုင်များမှာ လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သရက်ပန်းခိုင် ရိုးတံများဖြစ်တဲ့ ပန်းခိုင်ပထမကိုင်း၊ ပန်းခိုင်ဒုတိယကိုင်းနဲ့ တစ်ပွင့်ချင်းရှိအပွင့်ရိုး တံများဟာ သာမန်ထက်တိုနေကြပြီး တုတ်နေတတ်ပါတယ်။ အကိုင်းဖြာမှုများနေပြီး ပန်းခိုင်များဟာ အစိမ်း
ရောင်ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။ ပန်းခိုင်မှာ ပန်းပွင့်များစွာပါ နေကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် အဖိုပွင့်များ ဖြစ်နေကြကာ လိင်စုံပွင့်အထူးနည်းပါးနေပြီး ပန်းပွင့်မလာနိုင်ကြတာများပါတယ်။ အကိုင်းတစ်ခုတည်းမှထွက်လာတဲ့ ပန်းခိုင် တစ်ခုတည်းမှာပင် ပုံမှန်ပန်းခိုင်ရော
မူမမှန် တဲ့ပန်းခိုင်ရော အတူရှိနေနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပန်းပွင့် များဟာ အသီးမ တင်နိုင်ဘဲ မဲခြောက်သေသွား တတ်ပါတယ်။ အပင် ဇီဝကမ္မ ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်လာရမှုဖြစ်ကာ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျမ ဖော်ထုတ်နိုင်ကြသေးပါ။
(၇) သရက် ပင်များ ပန်းခိုင်ထွက်ပန်း ပွင့်ကာ အသီးမတင်နိုင်တဲ့အခြားအ ကြောင်းများလည်းရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ- ပန်းပွင့်စဉ် မြေတွင်း အစိုဓာတ် မလုံလောက်မှု၊ အစာအာဟာရဓာတ်များ ချို့တဲ့နေမှု၊ ပန်းပွင့်နေစဉ် ၀တ်မှုန်ကူးပေးမည့်ပျား၊ ယင်စသည့် အင်း
ဆက်ပိုး များနည်းပါးနေမှု၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု စတဲ့အချက်များ ကြောင့်လည်း အသီးမတင်နိုင်ကြတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရ မှာက ပန်းခိုင်ထွက်ပန်းပွင့်ပြီး အသီးကင်း စတင်လာပြီးနောက်ပိုင်း အသီးတွေ ကြွေ ကျကုန်လို့ အသီး မတင်
တာနဲ့ မရောမိစေ ဖို့လိုပါတယ်။အသီးကင်းဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း သရက် သီးများမမှည့်မီအဆင့်ထိ သရက်သီးများ ကြွေကျ သွားရတဲ့ အခြေအနေ တွေကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
သရက်ပင်များ ပန်းခိုင်ထွက်ပန်းပွင့် လာကာ အသီးတင်လာပြီးနောက်ပိုင်း အသီး များ ဆက်လက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေစဉ် အသီး ရင့်မှည်လာသည့်ကာလအတွင်းမှာလည်း သရက်သီးများ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အသီးများ ကြွေကျ သွားတတ်ပါတယ်။ အများ
အားဖြင့် သရက်ပန်းခိုင် တစ်ခိုင်မှာ ပါတဲ့ လိင်စုံပွင့်များရဲ့ သုည ဒသမ ၆ မှ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အသီးရင့် မှည့်ခူး ဆွတ်နိုင်ကြပါတယ်။ သရက်မျိုး အလိုက် ကွာခြားမှုရှိကြသော်လည်း သရက် မျိုးအများစုမှာ သရက်သီးကင်းဖြစ်လာပြီးနောက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း
ခန့်ကြွေကျသွားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ သရက်မျိုးအများစုမှာ ပန်း ခိုင်တစ်ခိုင်မှာ ရင့်မှည့်တဲ့အသီးတစ်သီး သာကျန်နေလေ့ရှိပြီး အချို့သရက်မျိုးများ မှာ ပန်းခိုင်တစ်ခိုင်မှာရင့်မှည့်တဲ့သရက်သီး နှစ်လုံး သို့မဟုတ် ပိုပြီးကျန်ရှိပါတယ်။ အချို့သရက်မျိုး များမှာမူ ၀တ်မှုန်ကူး၊
သန္ဓေ အောင်ထားတဲ့အသီးကင်း ၁၅၀ မှာ တစ်လုံးသာ ရင့်မှည့်ချိန်မှာ ကျန်နေ တတ်ပါတယ်။
အသီးအရွယ် မရင့်သေးမီ အသီးကြီး ထွားမှုအဆင့်တိုင်းမှာ သရက်မျိုးတိုင်း အသီးကြွေကျ ပါတယ်။ အသီးအများဆုံး ကြွေကျေမှုကိုတော့ ၀တ်မှုန်ကူးပြီးနောက် ရက်သတ္တ သုံးပတ်မှ လေးပတ်သားမှာတွေ့ ရပါတယ်။ စောစွာ အသီးကြွေမှု အများဆုံးဖြစ်ရခြင်းရဲ့
အကြောင်းရင်းများကတော့ ၀တ်မှုန်ကူးမှုမရှိခြင်း၊ မိမိဝတ်မှုန်နဲ့ သဟ ဇာတမဖြစ်ခြင်း (self-incompatibility)၊သန္ဓေမ အောင်ခြင်း၊အသီးငယ်များအချင်း ချင်း အစာအပြိုင် စားသုံးကြခြင်း (competition among developing fruit)၊ ပိုးနှင့် ရောဂါ များကျ
ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အစိုဓာတ် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း (ရေငတ်ခြင်း) ကြောင့် အပင်တွင်းအစာအာဟာရနဲ့ ဟော်မုန်းများ မညီမျှမှုစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် အသီးကြွေမှု များတဲ့ ကာလကတော့ သန္ဓေ အောင်မြင်ကာ အသီးတင် ပြီးနောက် ရက် ၆၀-၇၀၊ အသီး ကြီးထွားမှုအလယျပိုငျး ကာလမှာ ဖွဈပွီး တတိယ အကွိမျ အသီးေ
လိုအပ်သည့် အစာ အာဟာရများ ကြွေးခြင်း၊ (၄) အပင်ဟော်မုန် များကို အသုံးပြု ကြခြင်းနှင့် (၅) ၀တ်မှုန်ကူးမှု ကောင်းမွန် လာစေရန် ပျားများ၊ ယင်များ မွေးမြူ ကူညီပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။
အသီး ကြီးထွားနေစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မိုးသီးကျခြင်း၊ မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးအုံ့မှိုင်း နေကာ နေသာမှု နည်းပါုးခြင်း စတဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေ များကြောင့်လည်း အသီးများ ကြွေကျ နိုင်ပါတယ်။ အသီးကြွေမှု နည်းပါး သက်သာ စေရန်
အတွက်သရက်မျိုး အလိုက်၊ စိုက်ပျိုးရာ ဒေသအလိုက် သင့်တော် ကိုက်ညီတဲ့ စိုက်ပျိုး ပြုစုနည်း စနစ်များကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက် ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။
– ဒေါက်တာ (စိန်လှဗိုလ်)
အတွဲ(၁၄) အမှတ်(၂၀၅)၊ ဇွန် ၂၇ – ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်
ကွကျသှနျနီ အခှံတှကေို လှငျ့မပဈပါနဲ့..ဒီအတိုငျးသုံးလိုကျပါ..
အသကျရှညျ ကနျြးမာအောငျ ဘယျလို နထေိုငျစားသောကျမလဲ